Boxing, naphezu unya zako, abathanda ukubukela eziningi, kuhlanganise nabesifazane, futhi ngezinye izikhathi izingane (uma avunyelwe abazali). Ngisho kude abantu yezemidlalo sika ake kalufifi; kepha ukucabanga ukuthi knockdown. Leli gama ngezinye izikhathi asetshenziswa ngomqondo ongokomfanekiso, zikude ebhokisini. Nokho, uma unentshisekelo sina e sparring esiyingini, kudingeka ube ukumelwa esinembile kakhulu izenzakalo ezenzeka lapho.
Uyini isibhakela knockdown kanye nemithetho yayo
Iningi imigomo ezemidlalo kukhona osetshenziswayo uthuthumele izimbangi. NgesiNgisi le "knockdown" - kuyinto "umonakalo knock off ukukhahlela." Noma ubani kwaba, ukulahlekelwa sesimweni elungile futhi iba iphuzu wesithathu ukwesekwa. Futhi kungakhathaliseki ukuthi iyini - isandla, umlenze noma sonke ebusweni emuva. Lesi simo kuthathwa njengesibikezelo esiyiso knockdown. Uma phambi unompempe safinyelela isibalo eziyishumi, athlete uzokwazi ukuba umelele futhi baphakamise izandla zawo elungela impi, isikhundla ichazwa njengesifo knockdown. amabhonasi Special futhi amaphuzu engeziwe iletha - ijaji kufanele sidonsa kubekwa yesikhashana lesitha njengoba omunye shot olunembile.
Knockout ne knockdown ihluke nomunye kuphela ngokuya hook ezingabanjwanga nobe uppercut. Uma lo msubathi akuyona yahlulwa isimo ngezithukuthuku "eziyishumi" asukume, ijaji lizwakalise lokhu njengethuba "out", futhi umphikisi wakhe unikelwa ukunqoba.
An simo ezithakazelisayo Kwenzekani lapho boxer ngokushaya eyaphuma iringi. Referee count izokwenyuka amabili. Nokho, ngalesi sikhathi wahlulwa fighter kufanele naso isikhathi sokusukuma hhayi kuphela, kodwa futhi ukuze ubuyele endaweni yesikhulumi, ukuze kususwe izindophi ngokuvamile igcina nokuhlonishwa Knockout.
Knockout zobuchwepheshe Knockout win
Umphathi esiyingini, ematheni kanye obungenakuphikwa, kuyinto unompempe. yena kuphela enquma ukuthi ukulwa ungaqhubeka. Lapho isimo omunye abasubathi uphefumulela kuye singabaze angase ubonane nodokotela. Uma udokotela yaziwa njengenye ingozi a knockdown, ukulwa wayeka, futhi iyashaya aphuthelwe liphenduka oshaya phandle, kuphela lobuchwepheshe.
Yinye kuphela umuntu ongakwazi inselelo ngesinqumo yijaji - isekhondi boxer. Kodwa ukuthi angenelele kungaholela esingalwenza uma uwisa ithawula ku iringi, ke neyaziwayo ekunqobeni isitha ngenxa zako sobala.
Kukhona ezinye ubuqili ekunqumeni isikhundla boxer esiyingini. Ngakho, ukuma knockdown - sokuhamba umqondo womsubathi ku izindophi kanye nokucabanga unompempe ukuthi ngokuwela kwakhe baqhubeka kuphela. Uma izinsolo zalowo mahluleli evela, futhi uqala ukubala.
Qaphela ukuthi izimpi ubuqhawe emi knockdown njengoba mqondo. Kodwa izimpi professional ekilasini ephansi, futhi ikakhulukazi amateur, it is waphawula.
Hhayi njalo izimpi kuthiwa unqobile amaphuzu, Knockout okumsulwa noma lwezobuchwepheshe. Uma boxer emzuliswaneni ezintathu achitheka phansi ngesikhathi sokugcina wakwazi ukuya kwezinyawo zakhe, unompempe eyeka ukulwa. Noma ubani aphuthelwe ezintathu umthelela sina kubhekwa akhishwe ngokuzenzakalelayo. Nokho, lo mthetho awusebenzi ngaso sonke isikhathi uya khona. Qinisekisa ke kuyahlonishwa ekulweni, ebanjwa WBA.
Le nkulumo ibhekisela umonakalo wamaphaphu, lapho boxer crouches kwisitezi isikhathi esifushane kakhulu, ngokuphelele hhayi kuphela ngaphandle kokuwa, kodwa asishiywa nge insika lesithathu isikhathi eside. Nokho, ngisho nalapho ephuma ime mpo akuyona imizuzwana ezingaphezu kwezinhlanu, unompempe namanje iqala ngokubala.
Kuvele mazwi athakazelisayo: oshaya phansi - kuba isimo kunalokho amateur iringi. Ngo lochwepheshe olufana, izimo ezinjalo ezingajwayelekile kakhulu, ngoba abasubathi ayakwazi ukuthuthela kude ukuhlaselwa kuyingozi futhi sihlakulele okukhuthazela nokukhuthazela. Kodwa ochwepheshe akuzona njalo ukwazi bazivikele knockdown.
Rikishi (wrestling) - indandatho kuduma izulu. Biography emfushane. umqhele amagalelo
Nikolay Nikolaevich Novosiltsev: Biography nokufeza
Umuthi 'Divigel'. imfundo
Njengoba abafundi bahlala ehostela, njengoba ukhululekile khona?
A intela olulodwa imali kwabalelwa. ehlukile ezimali inhlangano nge imisebenzi agqagqene